Inyocha gị Twitter Na-eso | Martech Zone
Inyocha gị Twitter .gbaso
Tọzdee, Disemba 27, 2011 Tọzdee, Disemba 27, 2011 Douglas Karr
Schmap weputara a Nyocha profaịlụ Twitter ngwá ọrụ nke ahụ zuru oke. Site na iji nyocha nke ndi na eso uzo gi na ihe ndi ozo, Schmap nwere ike inye gi nyocha zuru ezu banyere ebe ndi na-eso uzo gi si bia, oru ha ha bu, onu ogugu ha na obuna mmetuta ha. E nwere ihe a free isi analysis nakwa dị ka a nyocha zuru ezu. Ọnụahịa nyocha ahụ dabere na ụdị akaụntụ ị na-enyocha mana sitere na ihe dị ka $ 25 maka onye ọrụ na-abụghị nke azụmahịa na $ 125 maka ụlọ ọrụ.
Banyere Schmap: Schmap bụ onye na-ahụ maka ọrụ teknụzụ ebe ya na onye mbipụta akwụkwọ mpaghara, yana ezigbo nka na ntanetị nke mpaghara, mmekọrịta mmadụ na ibe, azụmahịa na ezigbo oge web. A maara anyị nke ọma maka ntuziaka obodo anyị na-ewe oge, yana ọrụ Twitter anyị na-ewu ewu.
Ndị a bụ ụfọdụ ọnụọgụ akọrọ site na nyocha zuru ezu maka @onyedikachi_ (nke dịkarịsịrị karịa ndị na-eso ụzọ 30,000!).
Site na Mba
Site na Steeti
Site Ndi mmadu
Site na Mmasị
Site na Mmetụta Twitter
Site na Ọrụ Twitter
Site na ogologo oge ha nọrọ na Twitter
Site na ụdị nke Akaụntụ Twitter ha na-agbaso
E nwekwara ụfọdụ stats ndị ọzọ, enwere ike ibudata nkọwa zuru ezu dị ka CSV. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ijide n'aka na ị na-adọta ndị na-ege ntị ziri ezi, aga m agba gị ume ịzụta nke ahụ nyocha zuru ezu. Nsonaazụ data m nwetara gosipụtara usoro m maka ịdọrọ ndị na-eso ụzọ Twitter ma enwere m obi ụtọ na nsonaazụ ahụ. Naanị ebe na-enye m nsogbu bụ na m na-eledo ụmụ nwanyị anya. Ikekwe, ọ bụ m mgbe niile iyi nke geek okwu… maa ụfọdụ ọrụ na-eme.
Tags: schmapschmap.itTwitternyocha twitteromume igwe mmadu twitternyocha ndị na-eso ụzọ twitterụmụazụ twitter
Ihe kpatara na ndị enyi gị anaghị emebi gị
Kedu onye nwere ndị na-eso ụzọ Twitter gị?